Samaynta Sense of Dating iyo Xiriirka
Last updated: Jan. 05 2018 | 2 min akhri
Dating waa mid ka mid ah waxyaabaha kuwa ku dhawaad ​​qof kasta waajaho iyadoo dareenka ugu yaraan qaar ka mid ah ka Cabsaday, hal mar ama mid kale. Ka dib dhan, qabashada xiriirka adag tahay iyo mararka qaar oo aysan suuragal ahayn waa in la ogaado waxa uu yahay in aan qofka kale loo runtii raadinayso. Dadka u helin naftooda dhibtoonaya in xidhiidhka inta badan dareensan yihiin in socday taariikhaha dheeraad ah oo iyaga siin doonaa fursado dheeri ah, kaliya is-heli dhibtoonayo arrimaha xitaa ka adag sidii ay keentay dadaalka ay kordheen.
Waxaa jira dhowr sababood in tani ay dhacdo, laga bilaabo awood in ay iskula xiriiraan si ay xaqiiqada ah in dadka mararka qaarkood doonayaan in wax gebi ahaanba ka duwan cilaaqaadyada. Warka fiicani waxa weeye in aysan u ma'aha inay u adag.
Mid ka mid ah siyaabaha ay u qaadan cabsi iyo naxdin baa ka soo shukaansi waa in ay ka dhigaan wax walbo lighthearted bilowgii. Ma jirto baahi loo qabo in biqin ama Xumaaday ku saabsan taariikh ugu horeeyay, sababtoo ah waxaa dhab ahaan in uu yahay, taariikh koowaad. Ma jirto baahi si ay u noqoto taariikh labaad hadii aan si fiican u. Taariikhda A horeeya waa in la eegay sida fursad u leedahay in wada hadal furan oo daacad ah ula qof kale si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan qofkaas iyo markeeda, ogolaan qofka si aad u hesho war dheeraad ah oo adiga kugu saabsan.
Waxa kaliya in dadka u muuqdaan in ay ku adkaysato badan oo ku saabsan ka badan socday taariikh ugu horeysay waxa uu helaa in taariikhda ugu horeeyay. Dadka qaar waxay u muuqdaan in ay leeyihiin ma dhib wax alla wixii taariikhda helitaanka ka dib taariikhda. Qaar kale waxay u arkaan in ay aad iyo aad u adag. Xaaladaha noocaas oo kale ah waxay kaa caawin karaan inay isticmaalaan website a shukaansi ama inay ka qaybgalaan munaasabado in ay ku wajahan tahay caawinta dadka ka heshid taariikh. Shakhsiyaadka kale ee aanay khasab ahayn raaxo leh taariikhaha la soo muhiimad imata iyo helo habab u gaar ah si loo hubiyo in ay heli doonaan taariikhda u ekaaday badan oo dhaqameed. Rumayso ama ha rumaysan, mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee is weydiiyo soo taariikh waa at park eyga.
Waxaa jira wax ku saabsan lahaanshaha eey in jabiyo barafka. Waa sahlan tahay in aad la hadasho qof ku saabsan xayawaanka ka badan waa in laga hadlo waxyaabo kale. Waxa ay ku siinaysaa fursad ay ku sheegto wax qofka in marka aad u badan tahay oo aan lahaa ayaa sheegay in wax kasta oo dhan ayaa aad u ahayd xaalad kale oo aad. Markii wax walba waxaa loo tixgeliyaa, Waa layaabna ma leh in eey park waa meel caan ah oo noocaas oo kale ah si aad u soo jiita qof. Taasi waxey ku siineysaa wax inaad kala hadasho iyo waxaad ogaan haddii lagu weydiisto in aad soo taariikh qof in uu leeyahay xayawaanka waxaa in laba idinka mid horey u ugu yaraan hal kawada siman yihiin.
Ujeedadu waxay tahay in aad badasho shukaansi doonto ugu dambeyntii la soo gabagabeyn in shakhsiyadaada iyo sida aad u go'aansato in ay la tacaalaan wax guud. Ayaa kaa caawin doona in aad go'aan sida loo helo taariikhda in marka hore. Marka aad halkaas tagto, waxa ugu muhiimsan in la xusuusto waa in nuurka wada hadal iyo inay u ogolaato inuu aad qaadan meel kasta oo laga yaabaa in ay aad qaadato. Sababta oo ah waxa kaliya laga yaabaa in qofka kugu habboon dhamaadka.